Kooxaha Premier League Oo Lagu Wargeliyey In Muddo Sannad Ah
Kooxaha horyaalka Premier League ayaa lagu wargeliyey in ay suurtogal tahay inay ku ciyaaraan garoomo albaabadu u xidhan yihiin oo aanay taageereyaal joogin muddo sannad ah.
Tallaabadan oo ka dhigan in xili ciyaareedka dambe uu garoomo madhan ahaan doono, isla markaana ay kooxuhu waayi doonaan lacago badan, waxa kale oo ay koox walba ciyaartoygeedu geli doonaan 14 maalmood oo karantiil ah ka hor inta aanu dib u bilaabmin horyaalka hakadka ku jira.
20-ka kooxood ee uu ka kooban yahay horyaalka kubadda cagta Premier League ayaa maanta ku heshiiyey in fuliyaan tallaabada ugu horreysa ee kusoo laabashada horyaalka, waxaanay maalinta berri ah dib u bilaabi doonaan tababarka oo dhawr weji mari doona.
Heshiiska ay kooxuhu gaadheen ayaa waxa uu waddada u furayaa in bisha June horyaalka dib loo bilaabo, laakiin dhakhtarka sare ee horyaalka Premier League, Mark Gillett ayaa ka digay in shacabka dalkaas loo diidi doono in ay meelaha fagaaraha iskugu yimaaddaan lixda illaa 12-ka bilood ee soo socda, taas oo keeni karaysa in garoomo madhan lagu ciyaaro xili ciyaareedkan inta ka hadhay iyo midka soo aaddanba.
“Way caddahay in xaaladda caafimaadka ee bulshadu aanay isbeddeli doonin lixda ilaa 12-ka bilood ee soo socda. Waxa muhiim ah in dadku fahmo inay arki doonaan isbeddellada dhaqan.” Ayuu yidhi Mark Gillett, waxaanu intaa ku daray: “Talada nooga timid dawladdu waa in haddii aanu karantiil samaynayno inay noqoto 14 maalmood.
“Waa inaad joogto deegaanka hotel muddo 14 maalmood ah si dhab ahaan loogu hirgeliyo karantiilka.”
Dhakhtarku waxa uu sheegay in la iskugu iman doono kulamo dambe oo lagu go’aan qaadan doono, waxaase uu xusay inay noqon doonaan kuwo cid walba farxad gelin doonta.
Haddii sida dhakhtarku sheegayo ay dhacdo, waxa kooxaha soo gaadhi doona khasaare weyn oo lacageed, waxaana xataa qaarkood ku adkaan doonta inay mushaharooyinka iska bixiyaan.
Manchester United ayaa jugta ugu weyn ay ku dhici doontaa, waxaana ku xigi doonta Arsenal, halka ay Tottenham iyo Liverpool saddexaad iyo afraad noqon doonaan.
Halkan ka akhriso dakhliga maalinlaha ah ee kasoo gala koox kasta garoomada iyo inta ay sannadkii ka noqonayso: